Home Ulo oru Europe Kieran Tierney Childhood Akụkọ gbakwunyere Eziokwu Untold Biography
Kieran Tierney Childhood Story Plus Untold Biography Eziokwu site na LifeBogger
LB na-egosi Full Story of a Football Genius kasị mma mara aha ya bụ "Mazị Kwuru“. Anyị Kieran Tierney Childhood Story Plus Untold Biography Eziokwu na-ewetara gị akụkọ zuru oke nke ihe ndị ama ama site na mgbe ọ bụ nwata ruo ụbọchị.
Akụkọ Nwata Kieran Tierney- Nyocha. Ebe e si nweta ya TeamTalk na CelticQuickNews
Nchịkọta ahụ metụtara ndụ ya mbụ, nzụlite ezinụlọ, agụmakwụkwọ / ịkọ ọrụ mbụ, ndụ ọrụ ya mbụ, ụzọ nke akụkọ ama ama, ibilite na ama akụkọ, mmekọrịta, ndụ onwe onye na ụdị ndụ ya wdg.
Ee, onye ọ bụla maara na ọ bụ Onye nwere aka ekpe nke ukwu nwere ikike nke mere Arsenal na ndị otu egwuregwu bọọlụ kachasị elu na-arịọ ikpere ha maka mbinye aka ya. Agbanyeghị, ọ bụ naanị mmadụ ole na ole na-atụle akụkọ ndụ Kieran Tierney nke bụ ihe na-atọ ụtọ. Ugbu a na-enweghị inwekwu ogo, ka anyị bido.
Kieran Tierney Childhood Akụkọ gbakwunyere ihe ndị mere banyere akụkọ ndụ ya - Nzụlite ezinụlọ na Ndụ mbu
A mụrụ Kieran Tierney na ụbọchị 5 nke June 1997 na nne ya, Gail Tierney na nna, Michael Tierney, na Oké Osimiri Irish, kpọmkwem Douglas, isi obodo Isle nke mmadụ.
Kieran Tierney nwere ezinụlọ ya na mgbọrọgwụ ya BỤGHỊ si England, Ireland ma ọ bụ isi Scotland, MA si Isle nke mmadụ, agwaetiti nwere oke osimiri gbara agba, nke dị na etiti oge a na-ese foto.
Kieran Tierney- Ndụ mbụ na nzụlite ezinụlọ. Ebe e si nweta Digimap
N'agbanyeghị ezinụlọ ya na akụkọ ntolite ya, ọ ga - ekwe omume na ndị nna nna Kieran Tierney so na ndị tara ahụhụ n'aka ndị ọgba aghara Viking. Ndị a bụ Norsemen bụ ndị sitere na ngwụcha narị afọ nke 8 ruo na narị afọ nke 11th wakporo Britain. Ị maara?… Edere ala Kieran Tierney nke Douglas na akụkọ ntolite ka ọ bụrụ ebe mbụ na Great Britain ndị agha wakporo Vikings kwụ ọtọ gburugburu AD 793.
Onye amaala Bekee nke nwere ntọala ezinụlọ ezinụlọ Scottish dị ka otu n’ime ụmụ abụọ nye mama ya mara mma, Gail na papa Michael (ha abụọ e sere n'okpuru) ndị na-eme na 50 ha dịka n'oge ede.
Ndị nne na nna Kieran Tierney
Kieran toro na nwanne ya nwanyị nke okenye na nne na nna ya na Muirhouse, ụlọ obibi obibi nke dị na mgbago ugwu Edinburgh, isi obodo Scotland. N'iji ibi ndu dika nwata, akuko kwuru na dika nwa amuru ikpe azu, Kieran buru onye mbu ma ocha muru ndi nne na nna.
Kieran Tierney tolitere dị ka onye na-ahụ maka nwa nwoke Celtic. Onye isi ezinulo ya (nna ya), Michael gbara mbọ hụ na ndị ezin’ụlọ niile bụ ndị na-ejide tiketi oge Celtic. N'ikwu ya, ezinụlọ ya niile bụ ndị egwu Celtic na-agbasi mbọ ike ebe bọọlụ klọb na-agbafe akwara ha.
Dịka nwata, Tierney na-ajụkarị nne ya maka uwe akwa Celtic kwa ụbọchị ekeresimesi. Otu oge kwesịrị ncheta n’oge ọ bụ nwata bụ oge Celtic meriri okpukpu abụọ nke Scottish Premier League na iko otu, nke mere ka mkpebi ya bụrụ onye egwuregwu ịgba ama ama.
Kieran Tierney Childhood Akụkọ gbakwunyere ihe ndị mere banyere akụkọ ndụ ya - Nkụzi na ịrụ ọrụ
Ndị mụrụ Kieran Tierney mere ka ọ kuzie akwụkwọ n'otu ụlọ akwụkwọ kachasị mma nke Motherwell kpomkwem St Brendan's RC Primary. Ka emechara, Tierney bidoro ịga Highlọ akwụkwọ sekọndrị nke Lady anyị dịkwa na Motherwell. Ị maara?... Ọ nwere oge agụmakwụkwọ nwata ya n'ihi na nne ya, Gail Tierney bụ nwanyị nri abalị maka ụlọ akwụkwọ ya.
Ajụjụ ụlọ akwụkwọ dugara na mbanye ya ka ọ bụrụ ọkachamara:
N’ịkọ akụkọ banyere ụbọchị nwata ya n’ụlọ akwụkwọ, Kieran kwuru otu oge;
“Mgbe m nọ n'ụlọ akwụkwọ, a gwara anyị ka anyị chịta ihe anyị ga-ekwu ma hapụ ihe ndị anyị chọrọ ịrụ dị ka ọrụ mgbe anyị toro. M na-ahọrọ bọl mgbe niile ma onye nkụzi m gwara m na m ekwesịghị ịme ihe ahụ. Kama, ekwesịrị m dee ‘Onye Njikọ’ ma ọ bụ ihe ọ bụla metụtara".
Bụrụ na ị na-agụ amaghị, a “Onye ntinye”Bụ mmadụ nke ọrụ ya bụ iji osisi rụọ ụlọ, dịka steepụ, ibo ụzọ na windo ya. Tierney jụrụ kpam kpam na onye nkụzi ya tụrụ aro ka ọ bụrụ Onye Njikọ. Site na ụbọchị ahụ, o kwere nkwa iji gosipụta onye nkụzi ya na-ezighi ezi site na ibu ụzọ jiri isi ike na-agbaso nrọ ahụ nke ịghọ ọkachamara n'ọgba egwuregwu.
Mmasị ya na egwuregwu bọl asọmpi nke ụlọ akwụkwọ hụrụ ya ka ọ sonyeere St Ninian's High School. Schoollọ akwụkwọ a nke dị na Kirkintilloch nwere mmekọrịta mmepe mmepe nke ndị ntorobịa na ụlọ ọgbakọ Celtic. Mmasị Kieran Tierney nwere maka ịgba bọl na ịrụsi ọrụ ike na egwu emeghị ka ọ bụrụ uche siri ike kama ọ mere ka mahadum Celtic onye kpọrọ ya maka ule.
Kieran Tierney Childhood Akụkọ gbakwunyere ihe ndị mere banyere akụkọ ndụ ya - Ndụ Ndụ Mmalite
Mmasị Kieran Tierney nwere maka egwuregwu ahụ hụrụ ya ka ọ na-agafe ule dị iche iche na agba efe ma sonyere agụmakwụkwọ Celtic dị ka onye dị afọ 7. Mgbe ọ sonyere, ọ bụ ihe ọchị, mana Tierney chụrụ ọtụtụ ihe. E nwere oge ndị ọ na-atụghị anya oriri ncheta ọmụmụ ma ọ bụ ihe ọ na-ele anya n’ụlọ ezinaụlọ ya. Mana n'akụkụ mpịakọta, ọ na-agba bọl ma na-eme ihe ọ hụburu n'anya.
Kieran Tierney hụrụ onwe ya na-agbaso nrọ ya mgbe ọ sonyere Celtic. Ebe E Si Nweta Kaadị
N'inye akụkọ banyere otú ndị mụrụ ya si kwado ya n'oge ọ bụ nwata, Kieran kwuru otu oge banyere nna ya.
“Papa m hapụrụ m, chụọkwa nnukwu ihe n'àjà n'ihi m. Ọ na-eso m eme egwuregwu ọbụna na Sọnde. Nna m nwere obi ọjọọ karịa m, enwekwara m ekele maka ya. ”
Ị maara?… Kieran Tierney bidoro dịka onye aka-ekpe yana B NOTR-na-ekpeghị aka ekpe. Laa azụ n'oge ahụ, onye na-ahụ maka agụmakwụkwọ Celtic Martin Miller siri ọnwụ na ọ ga-anọgide na-abụ ọkpọ. Inwe echiche nke Celtic ahụ mere ka ọ na-agbagha ọtụtụ ihe dị mkpa mgbe ọ nọ na klọb. Otu n'ime ndị dị otú ahụ gụnyere ịghọ nwa nwoke bọl.
Ị maara?… Kieran Tierney bụ otu n'ime ụmụ egwuregwu bọọlụ na Celtic Champions League na-agaghị echefu echefu ebe klọb ahụ wụrụ ụwa akpata oyi site na-akụ FC Barcelona 2-1 na November 2012. N'okpuru bụ foto nke ya nke nwere obi ụtọ na ọrụ ịgba bọl nwoke.
Kieran Tierney nwere obi ụtọ dị ka nwata nwoke na-egwu bọl na onye na - agụ akwụkwọ. Ekele diri IG
Kieran Tierney Childhood Akụkọ gbakwunyere ihe ndị mere banyere akụkọ ndụ ya - Akpanwu akwukwo akuko
Ka Kieran na-etolite, ọ hụrụ onwe ya ka ya na ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ na-ebi ndụ nke ọma. Ọ lụrụ ọgụ maka ụdị ọganiihu ọbụlagodi akụkụ nke inweta ndị otu mba. Agbanyeghị, na etiti ọkara nke ọrụ ya, Kieran malitere ịgbasi mgba ike maka egwuregwu. N’okwu ya;
“O nwere oge m na-anaghị enweta egwuregwu. Na 14 ma ọ bụ 15, enwetaghị m nhọrọ maka Scotland na nke a bụ oge m na-anọghị n'òtù egwuregwu Scotland, ma ghara ịgba bọl klọb.
Obi abụọ adịghị ya, oge ndị dị otú ahụ siri ike karịchaa mgbe ọ nụrụ banyere ndị otu egwuregwu ibe ya na-eme nke ọma na ịbịanye aka na nkwekọrịta ọhụrụ. Ihe kacha njọ mekwara n’oge ahụ. Ọ bụ oge Kieran Tierney mebiri ụkwụ ya mgbe ọ nọ na akuku (naanị awa 24) nke ịme ndị otu Celtic mbụ. N’okwu ọjọọ ya;
"Esi m n'ihe kachasị elu m gaara abanye na nke kachasi echi ya, mana nke ahụ mere ka m bụrụ onye egwu na onye agụụ na-agụ," Tierney kwuru.
Ihe ọghọm ahụ mechiri ya mere na gburugburu December 2014. Ọ ghọrọ nnukwu ihe mgbochi iji merie nwata ahụ. Ị maara?… Ọ bụ echiche ahụ Celtic nyeere ya aka ịnagide ihe ọ kpọrọ oge kachasị njọ maka onye ọkpọ na-achọ ịgbaji ụkwụ. “Kwụkwụ m n'ụkwụ bụụrụ m ihe enyocha n'ezie. O nwere ike ịdakwasị onye ọ bụla oge ọ bụla ” Kieran kwuru.
Kieran Tierney Childhood Akụkọ gbakwunyere ihe ndị mere banyere akụkọ ndụ ya - Na-ewu ewu Akụkọ
Agbanyeghị na mmerụ ahụ, ntụkwasị obi Kieran dị elu na enweghị agba bọọlụ mbụ. Ke enye ama ọkọwọrọ ke unan, enye ama ọtọn̄ọ ndinen̄ede mbre.
Agbanyeghị na bọọlụ agbachaghị agbachapụ agbachapụ agbachakwute ya KỌRỌ Senior football nke bidoro na mbido Machị 2016 akwụghị ụgwọ. Intobanye na football kachasị elu mere ka ọ na-arụ ọrụ siri ike karịa ịnweta onwe ya dị ka onye enyemaka nke ndị isi na usoro ahụ. Ị maara?… Iji bulie ihe ịga nke ọma ya na klọb ya, Tierney gara n'ihu merie aha Scottish Premiership anọ gụnyere treble dị ka afọ 20.
Kieran Tierney Celtic Glory Days. Ebe e si nweta ya DailyMail na Onye Scotsman
Ọzọkwa na European ogbo, Tierney nwetakwara ọtụtụ otuto. Otu n'ime ihe a mere n'otu oge ọ jụrụ ịgba bọọlụ megide nwoke £ 160m nke PSG Kylian Mbappe na akụkọ eziokwu banyere Bayern Munich Arjen Robben na nke kachasị mkpa, Raheem Sterling.
A kọwara nke ọma ịme mgbaru ọsọ kachasị egwu Champions League megide Manchester City dị ka asọmpi kachasị adọrọ adọrọ nke Celtic n'oge 2018 / 2019. Nke a mere klọb Premier nke gụnyere Man City na-arịọ ikpere ya maka mbinye aka ya.
Kieran Tierney Bilie na ama megide Man City. Ebe e si nweta ya GlasgowLive na DailyRecord
Dị nnọọ ka ọtụtụ ndị egwu bọọlụ Premier chọrọ, onye na-akwado azụ kpebiri iso usoro nke Virgil van Dijk na Victor Wanyama. Ọ kwadoro mmegharị nke kachasị elu site na isonye na Arsenal n'oge ọkọchị nke windo oge 2019 na-agafe oge anwụ.
Ọ bụ mkpebi kachasị sie ike na ndụ ya ịhapụ ụlọ ọ hụrụ n'anya nke ukwuu. Obi abụọ adịghị ya, Kieran Tierney ga-abụ nnukwu mmeri na Premier League. Ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme.
Kieran Tierney Childhood Akụkọ gbakwunyere ihe ndị mere banyere akụkọ ndụ ya - Ndụ mmekọrịta
Site na mmụba ya na ịbụ onye a ma ama na ịbanye na nke Premier, ọtụtụ ndị ọkpọ ga-ajụ ajụjụ na-ere ọkụ:Ọnye na-bụ Kieran Tierney Nwanyị nwanyị?“…”Kieran Tierney lụrụ? ”…“ Ọ bụrụ ee, onye bụ nwunye Kieran Tierney ”
Ọnye na-bụ Kieran Tierneys Girlfriend
Enweghị agọnahụ eziokwu ahụ na anya mara mma ya, ọchị ọchị tinyere eziokwu ahụ bụ na ọ bara ọgaranya agaghị eme ka ọ bụrụ onye na-amasị ndị inyom ya. Agbanyeghị, n'azụ ụdị onye ọkpụkpọ Scottish na-aga nke ọma, enwere enyi nwanyị mara mma nke na-agafe aha Amy Hale. Amy Hale sere n'okpuru ebe a bụ onye na-agba egwu Irish na-esite na Kirkintilloch, obere obodo na Scottland.
Nwanyị nwanyị Kieran Tierney- Amy Hale. Ebe e si nweta ya AnyasịTimes
Eziokwu ahụ Kieran Tierney dị afọ 22 dị ka n'oge ederede na-egosi na ọ dị afọ atọ karịa nwanne ya nwanyị Amy Hale bụ onye 19.
N’ịchọ ịbụ WAG, a kọrọ na Amy so n’etiti ndị na-agba egwu kachasị mma na Ireland. Dị ka n'oge edere, Ndị Scott anwụ Naanị nwee akụkọ na ya ruru eru maka World Irish Dancing Championship na-ejide na Dublin.
Nwanyị nwanyị Kieran Tierneys Amy Hale na uwe ejiji ya. Ebe e si nweta ya AnyasịTimes
Banyere ịgba egwu, akụkọ na-ekwu na Amy Hale bụkwa nwa akwụkwọ mahadum. Ọ na-aga ịbanye na Mahadum Strathclyde iji mụọ “Nkuzi izizi”Dị ka n'oge a na-ede ihe.
Ma enyi na enyi nwanyi nwere obi uto ighari egwu na ebe ndi mara nma. Na-ekpe ikpe site na foto a hụrụ n'anya nke dị n'okpuru, o yiri ka ọ nweghị onye nwere ike ịkwụsị nwoke ahụ ịghọ otu n'ime di na nwunye kacha ewu ewu na Scottish.
Kieran Tierney na Amy Hale. Ekele diri ndi Scott anwụ anwụ
The Eziokwu ahụ bụ na ndị hụrụ ha abụọ esoro nwa oge na-eme ka o doo anya na agbamakwụkwọ ma ọ bụ alụlụ maka ha abụọ nwere ike ịbụ nzọụkwụ ọzọ.
Kieran Tierney Childhood Akụkọ gbakwunyere ihe ndị mere banyere akụkọ ndụ ya - Ndụ nke Onye
Themata onye bụ ezigbo aha ya bụ Kieran Tierney, ga - enyere gị aka ịmata onye ọ bụ.
Na-amalite, ihe mbụ mmadụ ọ bụla ga-ahụ banyere Kieran Tierney bụ ọmarịcha ala-ụwa ya na ọdịdị ụwa siri ike. Dị ka Ngolo Kante, ọ nọ n'etiti ndị egwuregwu nwere ezigbo agwa na onye maara etu ụwa n'ezie si arụ ọrụ.
Kieran bụ onye kwenyere na ya nwere ike ịnagide ọnọdụ dị iche iche ọ hụrụ onwe ya na ya. Otu ihe mara mma na ya bụ ike ya na ndị na-agba egwu na ụdị niile. Otu ihe atụ na-ahụ n'okpuru.
Kieran Tierney ruo Ala Nature- kọwara ya. Ebe E Si Nweta ka BTSport
Kieran Tierney Childhood Akụkọ gbakwunyere ihe ndị mere banyere akụkọ ndụ ya - Ndụ Ezinụlọ
Ndị otu ezinụlọ Kieran Tierney nọ ugbu a. Ma nne ya, nna ya, ụmụnne ya nwanyị, ụmụnne ya nwanyị na ndị ikwu ya niile na-erite uru dị na ịnweta nke onwe ha na-eme ka ọ bụrụ ọkwa kachasị mma nke egwuregwu Britain.
Kieren n’onwe ya gbasara nke ezi na ezi na ulo ya nne ya na nna ya. Ị maara?… Mgbe Tierney bịanyere aka n'akwụkwọ ya, ọ zụtara ụlọ na Motherwell maka ma mama ya ma papa ya.
Kieran Tierney- Imere nne na nna ya ka ha rie nkpuru nke oru ha.
Tupu ya agaa na Premier League, Kieran n'agbanyeghị na a na-akwụ ya ọtụtụ ego ka na-enweta uru dị na isoro ndị mụrụ ya biri n'ụlọ ọ zụrụ. N’okwu ya;
“Ibi ebe ndị mụrụ m bi na-eme ka m daa mbà n'ụzọ ụfọdụ. Mama m na papa m ka nọ n’aka. Akparaghị m ịpụ apụ ma nọrọ naanị m afọ ole na ole ma. ”
Otu n'ime uru Tierney nwere na mkpebi ya ibi na nne na nna ya bụ ịhụ ka mama ya na nwanne ya na-elekọta ya. akwa ruru unyi na na-asa nsị ya nke ọ masiri ịhapụ n’ọnụ ụlọ nke ya. Ọzọkwa n'okwu ya…
"Papa m na mama m na-emere m ihe niile, ha anaghịkwa emesi m ike. Ha na-eme ike ha niile inyere m aka na olulu, ma ọ bụrụ na m dị afọ asaa."
Kieran Tierney Childhood Akụkọ gbakwunyere ihe ndị mere banyere akụkọ ndụ ya - LifeStyle
Kieran Tierney nwere ọnụọgụ ahịa nke 12,50 Mill. € dịka n’oge edere. Nke a site na ya pụtara na ọ bụ onye egwu ịgba ọsọ miliọn.
Ị maara?… Inwe ihe bara uru nke ukwuu na ụfọdụ ga-atụgharị gaa na ndụ na-adọrọ adọrọ. Kieran Tierney nwere ụgbọ ala na-ere ere ma ọ nweghị akara nke wristwatches, diamonds na ọla ntị nke ọma.
Kieran Tierney LifeStyle. Ebe e si nweta ya Na-ekwu okwu
Kieran Tierney na-emefu ego ya na ezinaụlọ ya na ndị ya na ha na-emekọrịta ihe ọ na - enyere aka ịhazi mmefu ego nke ezinụlọ ha. Nrara ọ raara onwe ya nye n'ịhụ na nne na nna ya, ndị ikwu ya na ezigbo ndị enyi ya nwere ego ọfụma yitere nkwenye ya na egwu.
Kieran Tierney Childhood Akụkọ gbakwunyere ihe ndị mere banyere akụkọ ndụ ya - Eziokwu efu
Ighalo ihe ndekọ Arsenal tupu egwuregwu mbụ ya:
Ị maara?… Kieran Tierney kụrụ Arsenal ọfụma n'otu oge agbanyeghị na mbụ ịme ọpụpụ ya.
Kieran Tierney- Imebi ihe ndekọ Arsenal tupu egwuregwu mbụ ya na klọb mbụ. Ekele diri ArsenalTV
Ọ tụrụ onye ọrụ ahụike Arsenal anya ka ọ na-akụda ọkwa Aubameyang nke kwụ ọtọ n'agbanyeghị na ọ merụrụ ahụ. Tierney ruru ọkara nke ọkara na mbido mbụ ya. Ndị ọrụ ahụike Arsenal gwara ya ka ọ nwaa ọzọ, oge o mebiri ndekọ ahụ. Ị maara?… Tierney ruru 55cm nke na-ahụ ka ọ na-eti ihe Aubamyang ndekọ 1cm gara aga.
Ndi Anaghị Ekele: Tupu ọ bịarute na Premier League, Kieran Tierney nwere ọnụọgụ 8 jikọtara ọnụ na asọpụrụ onwe onye 16. Chọta n'okpuru ntakịrị ihe akaebe nke Wiki.
Eziokwu Kieran Tierney- Ọnụ ọgụgụ ya dị ịtụnanya
Nyochaa: Daalụ maka ịgụ akụkọ nwata anyị Kieran Tierney gbakwunyere Untold Biography Facts. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike ka anyị mee ihe ziri ezi. Ọ bụrụ na ịchọta ihe na-adịghị mma, biko kọọrọ anyị site na ịza ajụjụ n'okpuru. Anyị ga-eji nkwenye gị kpọrọ ihe mgbe niile.